Mahatsiaro Lockheed Martin C-130J-30 for FSX - Rikoooo
Downloads 27 372
FSX Akambano na SP2 & FSX-Steam
Fa FS2004 mifanaraka dikan- kitiho eto
Ny C-130J no vaovao dikan 'ny Hercules sy ny modely ihany no mbola ao amin'ny famokarana. Ivelany toy ny mahazatra amin'ny ankapobeny Hercules tarehy, ny J modely dia hafa mihitsy fiaramanidina. Ireo fahasamihafana ahitana vaovao Rolls-Royce AE 2100 D3 turboprops amin'ny Dowty R391 mitambatra scimitar Helisin'ny, Hafanàm-po an avionics (anisan'izany ny Loha-Up Displays (HUDs) isaky ny mpanamory) ary mihena mpiasa takiana, roa mpanamory, iray entana tompony, ary ny anankiray mpiasa lehiben'ny. Ny C-130J manidina haingana kokoa, avo kokoa sy lavidavitra kokoa noho ny teo aloha rehetra C-130 modely.
Kitapo feno FSX/ SP2 (sary DX9), endritsoratra 2D sy VC ampiasaina amin'ny HUD, & avionics Garmin. Klioba manokana, ampahany feno fanatanjahan-tena, modelim-pialam-bolo tena izy. Ny laharana efatra dia tafiditra ao amin'ny USAF, USCG, RAF ary US Marines Blue Angels. Avy amin'i Jean-Pierre Brisard sy Bob May - Premier Aircraft Design.